» यी हुन् कमेडी च्याम्पियनका उत्कृष्ट ४ कमेडियनहरु
यी हुन् कमेडी च्याम्पियनका उत्कृष्ट ४ कमेडियनहरु
मकवानपुर, ७ फागुन । नेपालको पहिलो स्ट्याण्ड अप कमेडी रियालिटी शो ‘कमेडी च्याम्पियन’ मा उत्कृष्ट ४ प्रतियोगीहरु छानिएका छन् । कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ५ मा पर्न सफल सुमन कार्की भोटिङका आधारमा बाहिरिएसँगै उत्कृष्ट ४ जना प्रतियोगीहरु छानिएका हुन् । उत्कृष्ट ४ मा विष्णुप्रसाद गौडेल मेक्सम, हिमेश पन्त, खड्गबहादुर पुन मगर र सुमन कोईराला रहेका छन् । यस भिडियो सामग्रीमा यी नै प्रतियोगीहरुका बारेमा छोटो चर्चा गरिएको छ । हेर्नुहोस् भिडियो–
१) विष्णुप्रसाद गौडेल, मेक्सम– कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ४ मा पर्न सफल पहिलो प्रतियोगी हुन् विष्णुप्रसाद गौडेल । मेक्सम गौडेलका नामले समेत चिनिने विष्णु स्याङ्जा निवासी हुन् । उनी डायलग डेलिभरी र प्रस्तुत गर्ने शैलीका कारण चर्चामा छन् ।
२) हिमेश पन्त– कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ४ मा पर्न सफल दोस्रो प्रतियोगी हुन् हिमेश पन्त । धादिङ निवासी हिमेशले कमेडी च्याम्पियनको सेटमा फरक–फरक कमेडी प्रस्तुत गर्दै हँसाउँदै आएका छन् । उनी राजनीतिका विषयमा कमेडी गर्न निकै सक्षम देखिन्छन् । उनी पर्फोमर अफ द राउण्ड हुँदै फाईनलमा प्रवेश गरिसकेका छन् ।
३) खड्गबहादुर पुन मगर– कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ४ मा पर्न सफल तेस्रो प्रतियोगी हुन् खड्गबहादुर पुन मगर । रोल्पा निवासी खड्गबहादुर वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीमा सर्वाधिक भोट प्राप्त गर्दै उत्कृष्ट ७ मा प्रवेश गरेका थिए । त्यस पश्चात भोटिङमार्फत उनी उत्कृष्ट ६ हुँदै उत्कृष्ट ५ मा पुगेका थिए । उत्कृष्ट ५ बाट उनी पर्फोमर अफ द राउण्ड हुँदै उत्कृष्ट ४ मा प्रवेश गरेका हुन् । उनको सरल कमेडीले सबैको मन जित्ने गरेको छ ।
४) सुमन कोईराला– कमेडी च्याम्पियनको उत्कृष्ट ४ मा पर्न सफल चौथो प्रतियोगी हुन् सुमन कोईराला । अर्गानिक कमेडियनका रुपमा चिनिएका सुमन ईटहरी निवासी हुन् । वाईल्ड कार्ड ईन्ट्रीमा उनको प्रस्तुतिलाई सर्वाधिक रुचाइएको थियो । उनी वाईल्डकार्ड राउण्डमा पर्फमर अफ द राउण्ड घोषित हुँदै उत्कृष्ट ७ मा परेका थिए । त्यसपश्चात उनी दले दाईका नामले चर्चित बनेका छन् । उत्कृष्ट ७ हुँदै उनी उत्कृष्ट ४ मा आईपुगेका छन् । उनी दुई पटक पर्फोमर अफ द राउण्ड घोषित भएका थिए । आदरणिय दर्शकबिन्द तपाईलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो ? तपाईको विचारमा कमेडी च्याम्पियनको पहिलो विजेता को बन्नेछ ? कृपया कमेन्ट गर्नुहोस् । यस्तै भिडियोहरुका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राईब गर्नुहोस् ।